Njalo wesifazane ufuna sibe bahle futhi uzilungise. isikhumba Smooth, izimonyo ngokucophelela, kwekhanda nasici - konke lokhu kuthuthukisa isithombe olulodwa, futhi kunikeza umbono mayelana umuntu. Futhi uma wenza ukushintsha lula ngokwanele, uma elahlekile umbono izinwele ke kwelinye mzuzu izinto ayilungile. Nokho, isivuno sihlala sikhona. Uma uboya naba buthuntu futhi banyukubala musa ukusheshe yithemba ukugijimela esitolo ngoba amashampu doroguschy, buso nezinye izindlela zokunakekela. Zama ukusebenzisa wort iSt John sika. Izinwele utshani ngokuvamile ziwusizo kakhulu ukwedlula imikhiqizo lemikhiqizo ezidumile. Abelapha bathi lesi sitshalo wathi - yilokho i-umlingo azosiza ekulweni a hairdo enhle.
amakhambi Folk noma buso ukulungele futhi isimo?
Ezitolo namuhla ngokuchichima imikhiqizo izinwele ukunakekelwa ukuthi isandla yezimo abhekene ifinyelela kuye. Banikezwe yokungabi nesikhathi esanele ukupheka buso okuzenzela kanti rinses kubonakala a okungcwele. Nokho, abesifazane abaningi nakho okubonisa ukuthi imikhiqizo yezimonyo zenziwa ngesandla futhi ngezinye izikhathi kuphumelele kangcono kunendlela sabaqeqeshiwe ejenti. Futhi ewusizo kakhulu wort iSt John sika izinwele. Kungani?
Uyichaza kanjani leli qiniso
Lokhu kunengqondo, kulokho izimonyo professional esekelwe ezikhishwe zezitshalo ezihlukahlukene futhi alinawo nezivimbelakuvunda, futhi yilapha isikhumba sakho ithola ukudla ephelele evela Imvelo uqobo lwayo. wort iSt John sika iyona engcono izinwele fitosredstv. Njengoba zezinkambi yemvelo kanye lotions herbal kufakwe ngokuphelele, akumangalisi ukuthi evamile, lapho uqala nje ukubona, isitshalo ngezici zawo futhi umphumela ngokuphilisa umhuzuko ngenhla izimonyo eqolo. Ngakho, musa ukufunda lazy ukulungiselela izindlela anakekele izinwele zabo ekhaya, bayehluka ku benzuzo futhi kuqukethe amavithamini.
wort iSt John sika izinwele - umsizi jikelele
Akusiyo imfihlo ukuthi ngamunye wethu izinwele ezahlukene uhlobo. Okunamafutha futhi omile, mncane futhi zomile, ziyaqothuka futhi ukuhlukana - zidinga indlela ngamunye. Akufanele sibakhohlwe mayelana sezinwele. Ezizwelayo, uthambekela dandruff, ke eletha eziningi izinkinga, kanye nokuntuleka ukunakekelwa kahle kubonakala ngokushesha ngemuva ukubonakala kwekhanda. A decoction of wort iSt John sika izinwele iyithuluzi isebenziseka ngezindlela eziningi, ofanele izinwele futhi isikhumba noma iyiphi inhloko hlobo. Nokho, kukhona ezinye ubuqili ukuthi kumele kunakwe.
Thola lokhu imbiza kungaba edlelweni noma ngisho engadini yakho. Lokhu ukhula ikhula ngokushesha futhi blooms kahle, ukuze ikhule ngisho ku zokuhlobisa. On lokho amandla has utshani, kakazi ogogo bethu. Amemezela ngentshiseko futhi kusetshenziswe wort iSt John analo izinwele. Izibuyekezo ubuhle yesimanje uqinisekise ukuthi esitolo ukuthola ukunakekelwa iphephile futhi isebenza ngempumelelo kunzima kakhulu. Phakathi naleso sikhathi, ngokuvamile likhula ngaphansi kwezinyawo zenu, nje kudingeka ukulungiselela kahle ke.
Yini property Hypericum
Njengengxenye isitshalo has inqwaba ejenti anti-ezibangelwa amagciwane ukukhuthalele abhekene nezinkinga sezinwele. Abasusa oiliness nekhava greasiness kusiza ukuqeda ukulunywa.
A decoction lokhu imbiza iwusizo kakhulu yokuthi uyasondla ekhanda. Kuyinto ngenxa yalesi aqede flaking futhi dandruff.
Naphezu kweqiniso lokuthi lokuqala inhlama yonke St John sika Kunconywa for isikhumba oily, kuyasiza ekulondolozeni umswakama umhluzi isakhiwo izinwele, futhi ngaleyo ndlela kunomthelela hydration ngempumelelo.
izinwele inkinga ukulahlekelwa ijwayelekile abesifazane kakhulu. St John sika wort kuqinisa izinwele follicle futhi ubuyisela isithiyo olwawuvikele. Nge ukulahlekelwa aqinile kungenziwa ajama umhluzi elula yokwenza izinwele mkhulu futhi kunempilo.
Uma usebenzisa decoction yamakhambi ezifana hashaza, uzophawula ukuthi izinwele uthole akhanye, akhanye futhi kuyaqina. Futhi ngokungeza izithako ezahlukene (uwoyela, amaqanda isikhuphasha, uju) imaski kuzosiza silondoloze ivolumu ukuma kwekhanda.
izinto zokusetshenziswa kuvuna
imbiza Dry St John sika wort angathengwa at ekhemisi noma ukuqoqa izinto zokusetshenziswa bebodwa, ehlobo. Sisule kufanele kube izithunzi, elinde amanzi emzimbeni ephelele. Ngemva kwalokho, utshani kungenziwa sigudluke esikhwameni lelineni yokuphisa njengoba kudingeka. Ukulungisa nekufakwa hypericum izinwele, udinga ukuthatha isipuni wort imbiza St John sika uthele ingilazi yamanzi abilayo. Ngemuva kwemizuzu engu-15, i-ukumnika kwaphumela kuyadingeka ukuze some. Manje kungenzeka ukusebenzisa ngokungeza amanzi phakathi uhlambulule. Ukwahlulela ukubuyekezwa, ke iyindlela ephelele ukuvala izikali bushelelezi ebusweni izinwele, wenze curls bushelelezi futhi uzilungise.
A decoction of wort iSt John sika
Pheka kube lula. Ukuze wenze lokhu, thatha isipuni amakhambi omisiwe futhi uthele ilitha lamanzi abilayo. Beka ingxube phezu ukushisa futhi imenze ngamathumba. Cool futhi nzima umhluzi, futhi manje ingasetshenziswa ezinye izinjongo. Agent isetshenziswa ukuthambisa amanzi nokwehlisa ngemiphumela elimazayo engase ibangelwe izihlanzi isakhiwo izinwele bazogcwalisa nabo amavithamini lonke. ukusetshenziswa avamile kunciphisa ukulahlekelwa imicu umhluzi futhi ilwisane ngempumelelo dandruff.
Kanjani ukugcina izakhiwo zalesi sihlahla fresh unyaka wonke
Yiqiniso, ukuqoqa futhi utshani obomile, kudingeka bazi ngezinga elithile, kanye nesikhathi khulula. St John sika uwoyela wort izinwele siyindlela mnandi. It is kuleli fomu ukwakheka okwelapha azigcina zonke amavithamini namaminerali. Amafutha angathengwa at ekhemisi ngasiphi isikhathi sonyaka, okuyinto ikuvumela ukuba wenze ngaphandle feedstock ukusesha. Nokho, ungakwazi ukupheka bebodwa. Ngezansi sizokutshela indlela yokukwenza.
Ukuze usebenzise umkhiqizo ezifana kuba lula kakhulu kunokuba umhluzi fresh. Umi esiqandisini isikhathi esingangonyaka, ukugcina zonke izakhiwo yokuqala simila. Ungahlala ungeza namafutha amancane buso imoto noma izinwele okunomsoco.
Ukuze wenze lokhu udinga qiniseka okuphakelayo fresh. Ungazami ukwenza amafutha utshani obomile - ke ngeke zisebenze. Udinga izimbali wequbula namaqabunga. Kuyadingeka ukuqoqa feedstock, eligoqiwe embizeni, uthele amafutha yemifino ukwenza kube ihlanganiswa ngokuphelele utshani.
Ibhange kudingeka ukumboza bese efakwa ilanga. The eside ingenalutho uyokuma elangeni elishisayo, ngcono umkhiqizo wokugcina. Qiniseka ukuthi ushukumisa Ukwakheka usuku ngalunye. Cishe ngemva kwenyanga ukuze cindezela utshani futhi uthele amafutha ku ibhodlela ingilazi amnyama. Yigcine kufanele kufakwe esiqandisini. Njengoba isizathu kungaba sunflower noma linseed uwoyela, amafutha omnqumo noma yimuphi omunye uwoyela. umsedari Basic, ibhilikotsi, peach ikhenela noma uwoyela Jojoba futhi awunankinga yokwenze njalo injongo, kodwa izindleko zayo iphezulu kakhulu.
Amafutha okuholela - kuyinto sine kakhulu, ekhuthaza isikhumba ukuvuselelwa. Ngaphezu kwalokho, kuba omunye Antioxidants enamandla kakhulu atholakalayo namuhla. wort iSt John sika emafutheni kusiza ukuvimbela isikhumba ukuguga. It is matasa ngokushesha okukhulu futhi engashiyi zinsalela okunamafutha.
Uma isikhumba phezu-sensitive ikhanda, inketho ekahle ukunakekelwa wakhe ngeke hypericum uwoyela. Izakhiwo kanye izicelo yalesi isakhiwo eliyigugu ababethi zonke Kuzuze izinwele oily. Lena amafutha okuthambisa kakhulu evimbela umswakama ukulahleka kanye nokuthuthukiswa tesikhumba. Kuyancomeka ukusebenzisa buso ngamafutha wort St kaJohane seborrhea oily.
Ukusetshenziswa amafutha omnqumo ayigugu ase
Kuye uhlobo izinwele indlela usebenzisa Ukwakheka kuyohlukahluka. Abanikazi izinwele oily kuyinto duo esiphelele uwoyela alimondi wort iSt John sika, ne ukwengeza amaconsi ambalwa uwoyela patchouli. Uma ukhathazekile seborrhea kanye dandruff, uhlanganise amafutha ingxenye Sesame, ezintathu esincelisayo. Engeza ambalwa amathonsi uwoyela tea tree. Lezi buso singasebenza izinwele ezingcolile, massaging ekhanda. Ngemuva kwemizuzu engu-30, laqanjwa okwelapha Wayedinga ukugeza off ngamanzi kanye imoto evamile. Ukuze ezomile uwoyela izinwele ingasetshenziswa kanye isikhuphasha amaqanda nobisi ukhilimu.
Nokho, lokhu akukhona iresiphi kwesokudla kuphela, ungakwazi ngendlela ehlukile ukusebenzisa uwoyela St John sika wort. Izakhiwo kanye isicelo kwalo mkhiqizo, siye echazwe kancane kakhulu. Ukwelapha amafutha ngaphezu kwalokho wasebenzisa ukubuyisela umbala, asheshise izinwele zikhula zibheke ngakhona. Curls e impatho enjalo ngokushesha uthole kukhanye enempilo futhi amandla.
Izinwele izandiso. Izibuyekezo ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo
Aphuce ithempeli - kwekhanda for the lady abanesibindi